Printer ​မှာ ​သတ်​မှတ်​ထား​တဲ့ ​စာ​ရွက်​ရေ ​ကုန်​ဆုံး​သွား​ရင် ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Printer ​မှာ ​သတ်​မှတ်​ထား​တဲ့ ​စာ​ရွက်​ရေ ​ကုန်​ဆုံး​သွား​ရင်
​နတ်​ဆိုး: ​အစ်​ကို​ရေး printer ​တွေ​စာ​ရွက် ​အ​ရွက်​ရေ ​သတ်​မှတ်​ချက်​ကုန်​သွား​ရင်​သုံး​လို့​မ​ရ​တော့​ဘူ ​အဲ​ဒါ​ဘယ်​လို​ပြန်​ဖြည်​မ​လဲ​လုပ်
printer ​မှာ ​အ​ရွက်​ရေ ​သတ်​မှတ်​ချက်​ထက် ​ကျော်​လွန်​တာ​ကို ​ပြန်​ပြီး​ဖြေ​တာ ​သုံး ​နည်း​ပြော​ပြ​လိုက်​ပါ့​မယ် .
(၁) ​ကျွန်​တော်​တို့ printer ​ကို ​ဖွင့်​လိုက်​ပြီး ​အ​ထဲ​က cartridge ​ကို ​ထုတ်​လိုက်​ပါ . cartridge ​ရဲ့ ​နောက်​ဖက်​မှာ circut ​ပြား​လေး ​သေး​သေး​လေး​ရှိ​ပါ​တယ် ​တွေ့​မယ်​လို့​ထင်​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒီ့ circut ​ပြား​လေး​မှာ ​ငုတ်​တိုင်​လေး​တွေ ​ထောက်​ဖို့ ​အ​စက်​က​လေး​တွေ​ရှိ​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒီ့​အ​စက်​က​လေး​တွေ​ကို ​လိုက်​ရေ​ပါ .7​ငုတ် ​ရှိ​သ​လို ၊9​ငုတ်​လဲ ​ရှိ​တတ်​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒါ​က printer ​အ​မျိုး​အ​စား​နဲ့ ​ဆိုင်​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော်​တို့​သုံး​နေ​တဲ့ printer ​အ​မျိုး​အ​စား​ဟာ R230 ​ဖြစ်​မယ်​ဆို​ရင်​တော့9​ငုတ်​ရှိ​မယ်​ထင်​ပါ​တယ် . ​နဲ​နဲ​တော့ ​မေ့​သွား​ပြီ . ​အဲ့​ဒီ့​ငုတ်​အ​ရေ​အ​တွက်​ကို ​မှတ်​သွား​ပါ . printer ​ဆိုင်​တွေ​မှာ ​သွား​ပြီး​တော့ cartridge restater ​လို့​ပြော​ပြီး ​ဝယ်​လိုက်​ပါ . ​သူ​ပြ​တဲ့ cartridge restarter ​ရဲ့ ​နောက်​ဖက်​မှာ ​ငုတ်​တိုင်​လေး​တွေ​ရှိ​ပါ​တယ် . ​ငုတ်​တိုင်​လေး​တွေ​ကို ​ရေ​ကြည့်​လိုက်​ပါ . ​ကို့​စက်​နဲ့ ​ငုတ်​တိုင်​အ​ရေ​အ​တွက်​နဲ့ ​ကိုက်​တယ်​ဆို​ရင် ​ဝယ်​လိုက်​ပါ .
(၂) ​ဟို​တစ်​ရက်​က ​ကျွန်​တော်​တင်​ပေး​တဲ့ ​နည်း​ကို​သုံး​လိုက်​ပါ . ​ပို့စ်​က ​ဒီ​မှာ ​ပါ ..
​နောက်​ဆုံး​တစ်​နည်း​က​တော့ ​အ​ခု ​နောက်​ဆုံး​ပေါ်​နေ​တဲ့ cartridge ​ကို ​စုံ​တွဲ​အ​လိုက် ​ဝယ်​ပြီး​တော့ ​သုံး​လိုက်​ပါ . ​သူ့​မှာ ​တစ်​ခါ​တည်း auto restater ​လုပ်​ပေး​ပြီး​သား​ပါ .
​နိုင်​လေး May 9, 2012 at 8:10 PM